Sina nametaka ny sary vita amin'ny sary miendrika sary hosodoko vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny Villa Decoration Piedra
Sarivongana vita amin'ny metaly taratra vita amin'ny mavo toy ny haingon-trano Villa
Model No: MES26
Ny fomba volon-drindrina vita amin'ny vy vita amin'ny ivelany dia tsy mety, afaka mahita fomba fijery samihafa amin'ny zoro samihafa. Noho ny sary vongana vy tsy misy fangarony dia namboarina sy namboarina tamin'ny tànana rehefa nametraka ilay sary vongana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny na ho an'ny besinimaro izahay ary hita taratra amin'ny endrika kanto vita amin'ny vy ny fahitana. Ny mpanakanto sary sokitra dia manana endriny tonga lafatra ka ny sary sokitra maoderina sy ny tontolo iainana maoderina dia azo atambatra miaraka tsara kokoa. Ity kanto metaly ity dia mampiseho ny fifandraisana tsara amin'ny firindrana sy ny natiora.
Abstract Sculpture Sculpture's Abstract Sculpture:
Karazana vokatra Drafitra Abstract maoderina ivelany ivelany toy ny fanamboarana ny tany
Laharana modely MES26
Vitan'ny tany Tany anatiny
Vidiny miray nifampiraharaha
Technique Lasan-tanana sy polished
Fe-potoana 30-45 andro amin'ny habeny tsy tapaka
Payment TT / Union tandrefana
Teny lehibe Sary sokitra metaly
Theme Sary sokitra vita amin'ny metaly haingon-trano
Fampiasana Public, hotely sns
Momba ny orinasanay:
Mpanamboatra sary sokitra vy any Sina izahay ary namidinay ny sarivongana ivelany sy ny sarivongana manerana an'izao tontolo izao mihoatra ny 10 taona. Ny vokarintsika dia misy ny sary sokitra stainless vy, sary sokitra varahina, sary sokitra fiberglass sns. Manana ny orinasa manokana sy ny departemanta varotra koa izahay, mba hahafahantsika miantoka ny kalitaon'ireo vokatra sy tsara aorian'ny serivisy.
Ny tombony azo amin'ny sary sokitra ivelany:
1. afaka manome karazana maro vita isika hisafidianana izay azo namboarina.
2.Our material friendly environment tontolo iainana.
3. Mpanao asa tanana metaly matihanina any Chine izahay, ary manana mpanaingo talenta, mpiasa mahay ary inspektera QC manolotra asa tanana avo lenta ho an'ny mpanjifana
Ampidiro ny dingana:
1.Ny mpampiasa dia afaka mandefa ny sarin'izy ireo na ny sary mivantana.
2.Ny antsipiriany rehetra dia mila hamafisina amin'ny ekipa teknika ary homenay ny soso-kevitrao ianao na hilaza aminao raha misy ny sary sokitra hamokatra.
3. Rehefa vita ny fifanakalozan-kevitra sy ny kajy, ny ekipa injeniera dia manomboka manao ny famolavolana.
4. Mandritra io vanim-potoana io, handefa sary avy amin'ny fomba fijery samihafa arahinay ianao.
5. Aorian'ny fanamafisana farany, dia hamolavola bobongolo kely izahay, avy eo apetraka amin'ny famokarana.
Ahoana ny fahaizanao mamokatra?
Ny fahaiza-mamatsy 10 dia setra isam-bolana, raha manana ny baiko lehibe ianao hifandraisana aminay.
Misy takelaka stainless vy mendrika amidy eny an-tsena, ahoana no ahafahanao mahazo antoka ny fifehezana kalitao?
Ny mpanjifantsika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ka ny kalitao no ivon'ny vokatra eto aminay. Manana departemanta mifehy ny kalitao henjana koa izahay hiantohana ny kalitaonay.
Ahoana no ahafahanao manohana ireo tetikasako?
Manana traikefa amin'ireto sehatra ireto izahay hanome anao teknolojia matihanina sy consult.
Previous: Voaravaka zaridaina vita amin'ny vy tsy misy fangarony vita amin'ny sary sokitra natao ho an'ny daholobe
Manaraka: Zaridaina zaridaina metaly sary sokitra liona sary vongana sary sokitra manga eo ivelany
Ny sarivongana maoderina maoderina miaraka amin'ny famoronana Ant
Ny sary maoderina an-tsary ivelany ivelan'ny abstract.
Egret Sculpture School Metal Statue Art Design ...